ခေတ်ဟောင်းသမိုင်း အသံလှယ် အမည်နာမများ (၂) | ကိုသင်ကာ . . . . Ko Thinker
“အညမည ပစ္စယောများ” →
ခေတ်ဟောင်းသမိုင်း အသံလှယ် အမည်နာမများ (၂)
(ပထမတပိုင်းမှာ က ကနေ ဂ အထိ တင်ထားပြီးပြီ။ အခု ကျန်တာ ဆက်တင်ပေးပါမယ်။)
ငဘုတ (နိုင်ငံခြား) – ဘုဓမ် (Boodhm) [ROB, X, p. 106]
စကာလာ (အီတလီ) – Bernardo Scala ၊ “လက်နက် စက်ဆရာ စကာလာ” [လွှတ်တော်ပု၊ ဒု၊ စာ ၅၆၀]
စတုဗန်ကျွန်း – Cheduba ကျွန်း (မာန်အောင်ကျွန်း)။ အငူစွန်း လေးခုရှိသဖြင့် စတုဘာဟု အမည်တွင်ခဲ့သော ကျွန်းဖြစ်သည်။ [Travels, p. 217]
စတိုဝါ (အင်္ဂလိပ်) – ကပ္ပတိန် စထရိုဗာ (Capt.G. A. Strover)
စတိဿ – တရတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ်တွင်ရှိသော ပန်းသေးပြည် [မှန်နန်း၊ ပ၊ စာ ၇၈]
စပျစ်ရာ (အင်္ဂလိပ်) – သောမတ်စပီးယား (Thomas Spears)
စာဇင် (အင်္ဂလိပ်) – ရဲစခန်းမှူးအောက် အဆင့်နိမ့်သော ရဲအရာရှိငယ် (sergeant)။ “စာဇင်ထံသွားရောက် ပြောဆို။ မရှင်းမလင်း မထုချေဝံ့၍ ထွက်ပြေးလာကြောင်း” [လွှတ်တော်ပု၊ ဒု၊ စာ ၁၄]
စိန (စိန့်) – တရုတ်လူမျိုး၊ တရုတ်တို့ နေထိုင်သော နိုင်ငံ [တရုတ်နိုငငံ ချင်းမင်းဆက်ခေတ် (ဘီစီ ၂၅၅-၂၀၆) မှစ၍ ချင်းမင်းဆက် အုပ်စိုးရာဒေသနှင့် လူမျိုးကို China ဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ရာမှ တရုတ်နိုငငံနှင့် လူမျိုးကို စိန့်တိုင်း၊ စိန့် သို့မဟုတ် စိန လူမျိုးဟု ခေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ တရုတ်တို့ကမူ ဟန့်ခေတ် (ဘီစီ ၂၀၆-အေဒီ ၂၂၀) မှစ၍ မိမိတို့လူမျိုးကို ဟန့်ဟု ခေါ်ခဲ့ကြသည်။] [ရည်စိန်၊ ပျူခေတ်၊ စာ ၃-၄နှင့် ဝင်း]
စီကာဒင်္ဂါး (အာရဗစ် sikka) – ဗြိတိသျှတို့ စိုးမိုးအုပ်ချုပ်သော အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်း သုံးစွဲရန် အင်္ဂလိပ်အရှေ့ အိန္ဒိယကုမ္ပဏီက ၁၈၃၅ ခုနှစ်အထိ သွန်းလုပ်ခဲ့သော ဒင်္ဂါး [Hobson, pp. 834-5]
စီညိုရေအန္ဒြိနော (အီတလီ) – Signor Giovanni Andreino
စဲဂျွန်လော်ရင် (အင်္ဂလိပ်) – ဆာဂျွန်လောရင့် (Sir John Lawrence)
စောဠ – အိန္ဒိယတောင်ဘက်စွန်းနှင့် သီရိလင်္ကာမြောက်ပိုင်းတွင် နေထိုင်ကြသော တမယ် (Tamil) လူမျိုးစု ကြေးကုလား [စွယ်တော်စစ်တမ်း၊ စာ ၂၂၊ ၅၄] [Webster, p. 438]
စံကေနီ (အင်္ဂလိပ်) – ဂျွန်ကင်းနိန်း (John Canning) [အုပ်ချုပ်၊ တ၊ စာ ၆၇၊ E&B, p. 96]
စံဇေဘီရ (နိုင်ငံခြား) – စိန့် ဇေဘီးယား (St. Zaviers) [မြန်မာမင်း၊ စာ ၈၇]
စင်လ (အင်္ဂလိပ်) – Lieutenant Colonel Sale
စစ်ဗာရီ (စစ်ပိုင်) – အိန္ဒိယရှိ ဗြိတိသျှစစ်တပ်တွင် ဥရောပစစ်သည် ပုံစံအတိုင်း ဝတ်ဆင်၍ ဥရောပ စစ်စည်းကမ်းအတိုင်း လိုက်နာ အမှုထမ်းသော အိန္ဒိယတိုင်းသား စစ်သည်။ (ပါရှန် ဝေါဟာရ sipah မှာ စစ်သည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ထိုဝေါဟာရကို ပေါ်တူဂီတို့က ယူငင် သုံးစွဲခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ထံမှတဆင့် ဗြိတိသျှတို့က ယူငင်သုံးစွဲခဲ့ရာတွင် sepoy ဟူသော အသုံးနှုန်း ပေါ်လာခဲ့သည်။) [Hobson, p. 809]
စန္တရကန္တရှိန် – အာသံရာဇာ Chandra Kanta Singh [E. Frontier. p. 268]
စန္ဒရပ် (အင်္ဂလိပ်) – ဘုရင်ခံ ဆွန်းဒါး (Thomas Saunder) (ROB, X, p. 108)
စန္ဒြကန္တရှိန် – Chandra Kanta Singh
စမ္ပာ – (၁) စကားဖြူပင်၏ အနှစ် (၂) အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ဘီစီ ၆ ရာစုနှစ်က စတင်ထွန်းကားခဲ့သော အင်္ဂတိုင်း၏ မြို့တော် Campa (ယခု Bhagalpur မြို့) (၃) ယခု ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်းတွင် အေဒီ ဒုတိယ ရာစုနှစ်အတွင်းက ပေါ်ထွန်းခဲ့သော ပြည်ထောင် [India, p. 46; SEA, pp 26-7]
ဆီလွတ်မြို့ (အိန္ဒိယ) – Silhet ၊ “ဘင်္ဂလားမြို့အပိုင် ဆီလွတ်မြိုကနေ ပသီလူမျိုး အာပဒူမဂျီ” [လွှတ်တော်ပု၊ ဒု၊ စာ ၁၆၈]
ဆံလျင် (ဆလင်) (ပါရှန် serang) – သင်္ဘောသားတို့၏ အကြီးအကဲ၊ သင်္ဘောဆလင် [ROB, VIII, p. 390]
ဆွေဝါ (တရုတ်) – အနံ့သင်းသော စေဝှားပန်းပင် [ဝင်း]
ဇနရာလဂေါ်တွင် (အင်္ဂလိပ်) – ဂျင်နရယ် ဂေါ်ဒွင် [General Godwin)
ဇနင်ကာတင် (အင်္ဂလိပ်) – ဘရစ်ဂေးဒီးယား ဂျင်နရယ် ကော့တွန် [Brigadier General Cotton]
ဇနောင်သတ် (အင်္ဂလိပ်+အိန္ဒိယ) – ဗိုလ်ချုပ် သခင်ကြီး (General Sahib)
ဇလုပ်သင်္ဘော – sloop ဟု ခေါ်သော ဦးပဲ့ချွန်သည့် တပင်တိုင် ရွက်သင်္ဘောငယ် [ကုန်းဘောင်၊ ပ၊ စာ ၁၃၇ နှင့် Darymple, I, p. 222]
ဇဝိ (Jawis) – ဂျားဗားကျွန်း၊ ဂျားဗားကျွန်းသား [Hobson, p. 456]
ဇိဗေရိယပြည် – ဆိုက်ဘေးရီးယား [Siberia]
ဇူပရာဇာ – မဏိပူရာဇာ Jai Singh [E. Frontier, p. 35]
ဇူရဟတ်မြို့ – အာသံပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း ကိုဟီးမားမြို့ (Kohima) ၏ မြောက်ဘက်ရှိ Jorhat မြို့
ဇောရဟိန် – အာသံရာဇာ Jogeswar Singh [E. Frontier, p. 271F]
ဇော်ဇိန္တုံ (အင်္ဂလိပ်) – ဂျော့စွင်တံ (George Swinton) [ROB, X, p. 110]
ဇော်ရစီ (အင်္ဂလိပ်) – ဂျော့ (George) [ROB, VI, p 677]
ဇော်ရဇီဟရီရော်လင်သေည့် (အင်္ဂလိပ်) – ဂျော့ဟရီရော်လင်ဆန် (Lt. George Harry Rawlinson) [ROB, VII, p. 522)
ဇော်ရဇိပ် – မဏိပူရာဇာ Chaurjit Singh [E. Frontier, p. 37)
ဇံကေနီ (အင်္ဂလိပ်) – ဂျွန်ကင်းနိန်း (John Canning) [ROB, X, p, 110]
ဇံကြေမြင် (အင်္ဂလိပ်) – ဂျွန်ကင်းဘဲ (John Cambell) [ROB, VIII, p. 526]
ဇံတဝတ် (အင်္ဂလိပ်) – ဂျွန်ဒေးဗစ် (John David) [ROB, X, p. 110]
ဇံတာရတ် (အင်္ဂလိပ်) – ဂျွန်ဒိုင်းရား (Ensign John Dyer)
ဇံဟိုး (အင်္ဂလိပ်) – ဂျွန်ဟိုး (John Howes) [ROB, X, p. 110] (ဂရုဏာဒိုဇံဟိုအစ်သကွယ် = Governor John Howes, Esq.)
ဇင်းကွဲတာပံ (ကသည်း) – Guru Sham [Maitheis, p. 80]
ဇန္တာဝတ်၊ မက္ကရီကာ (အင်္ဂလိပ်) – Messrs Darwood and Macgregor
ဇန္တတ်ကြီး (ဟိန္ဒီ – Jemadar) – အစုအဖွဲ့ အကြီးအကဲ၊ အုပ်စုခေါင်းဆောင် [ရခိုင်ရာသစ်၊ ပ၊ စာ ၃၉၆ နှင့် Hobson, pp 458-9]
ဇာန်လောဝိ – Hon. J. Lowis (Dalhousie’s collague on the Council of the British India Government, C. 1851)